Famoronana orinasa ao amin'ny 9 Offshore Jusrisdictions & Banky kaonty any amin'ny firenena 17
Manolotra karazana fiofanana momba ny fananganana orinasa sy ny fitantanam-bola izahay nandritra ny 30 Years, anisan'izany ny iraisam-pirenena Tale Nomenae & fanompoana amin'ny mpiara-miasa, ny Tale Nominere dia 100% off-shore ary amin'ny raharaham-barotra amin'ny zony - izany hoe ny fitantanana ny orinasa rehetra dia ara-drariny ataon'ny mpandraharaha iray tena izy ivelan'ny rafitra ara-dalàna ankehitriny.
Nosafidianay ny juristiques manokana 9 izay tianay hikarakara, hitady ny ho tsara indrindra ary hanome ny fiarovana betsaka indrindra.
Ny Tale Jeneraly sy ny Shareholder dia avy amin'ny fampandraisana anjara, manasonia fifanarahana momba ny fifanarahana nomena an-tsitrapo eo amin'ny mpanjifa sy ny nomena. Anisan'izany ny fanambarana ny fitokisana izay manara-maso ny fomba fitantanana ny orinasa, ny andraikitra nomena ary ny fitaterana ny tatitra amin'ny tompony tsara.
Ity serivisy ity dia manome ny tombontsoa manokana sy ny tsiambaratelo ho an'ny tompon'ny orinasa, satria ny anaran'ny nomena dia hiseho amin'ny antontan-taratasy firaketana, amin'ny fifanarahana ara-barotra, ny fampiasana ny kaontin'ny banky ary ny rejisitry ny raharaham-barotra. Izany koa dia mametraka fa ny "fitantanana sy ny fanaraha-maso" ny raharahan'ny orinasa dia mafy avy any ivelan'ny fanjakana hetra ambony.
Ny votoatin'ny asa ataon'ny tompon'andraikitra sy ny hetsika ataon'ny orinasa dia hiovaova amin'ny raharaha, noho izany, ny saram-panompoana amin'ity serivisy ity dia hifampiraharaha sy hifanaraka amin'ny antoko tsirairay.